Josh အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（46.0MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Josh: Short Videos App - Watch For Free
Josh အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြီးဆုံးမြို့က Short ဗီဒီယိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို App ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကလောကဓာတ်လုံးကိုမှခန့်မှန်းချက်အခွက်တစ်ခုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရယ်စရာကိုဗီဒီယိုအသိုင်းအဝိုင်း app ကိုသငျသညျအကောင်းပျော်စရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးအဘို့သင့်အနှစ်သက်ဆုံးဖျော်ဖြေမှုကိုလိုက်နာပေးနိုင်ပါတယ်။ Amazing ဗီဒီယိုအဝန်း💕ဒီ App ကိုယခုလူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦး trendsetter!
ဖြစ်လာဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့ Josh ဆောင်ခဲ့ဒီတော့! ကအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေရေး App ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ကမ္ဘာလုံးကျော်အားလုံးထံမှ💕
လူတွေကဒီမှာချိတ်ဆက်! ဒါကအိန္ဒိယအတွက်လုပ် Tok ရယ်စရာဗီဒီယို, tik ဖျော်ဖြေမှုအပြည့်အဝထိုးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကို download လုပ်ဖို့နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုတွေ, ဖန်တီးမှုခေတ်ရေစီးကြောင်း, entertaining, Masti နှင့်အများကြီးပိုအိန္ဒိယ tiktok တိုတောင်းသောဗီဒီယိုများအားရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒေသခံရေစာရယ်စရာဗီဒီယိုများ မှစ. ထူးမြတ်သောရန်, သင်ဒီမှာအရာအားလုံးနဲ့တူရ!
💯အကောင်းဆုံး & လူကြိုက်ရေစီးကြောင်းအမျိုးအစား! 💯
ကခုန်, ဂီတ, ဟာသ, ဟာသ, နောက်ပြောင်မှုများ, စိန်ခေါ်မှုများ, Shayari, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, ချက်ပြုတ်, ဘောလီးဝုဒ်, ဖက်ရှင်, download, Whatsapp အခြေအနေ, DIY နဲ့တူထက်ပိုမို 15 အမျိုးအစားအထိထိန်းအွန်လိုင်းအကျော်ကြားဆုံးမြွေကိုဗီဒီယို Find
, ဟာသ, အသိုင်းအဝိုင်း, တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း, မြွေဗီဒီယို, ချစ်စရာ tik Tok & Like ဗီဒီယိုများအိန္ဒိယနှင့်အများအပြားကပို။
📹လွယ်ကူ! အံ့သြဖွယ်ပနျခြာပီ tik Tok status ကိုဗီဒီယိုများရိုက်ကူး🤳
Josh ရဲ့လွယ်ကူခြင်းကြောင့်အကောင်းဆုံးအိန္ဒိယ app ကိုဖွင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကပါ! ပိုပြီး Real-time filter များ, အထူးသက်ရောက်မှု, မကျြနှာကိုစတစ်ကာများ, မိတ်ကပ်ကင်မရာ, ရုပ်ပြောင်လွယ်ကူဖန်တီးသူရဲ့ဘဝပါစေနှင့်လူကြိုက်များ app ကိုအပေါ်ကြီးထွားဖို့ကိုကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းပေးနဲ့ Easy-To-အသုံးပြုမှုကင်မရာကိုတူသောအင်္ဂါရပ်များ, Josh!
🎼 Music ကိုပြသစာရင်းကို🎼
Josh အပေါ်ထိပ်သီချင်းများနှင့်ဂီတတံဆိပ်များအတွက်။ ကျော်ကြားဆွေးနွေးမှုများကိုရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်း-ထပ်တူပြုခြင်းနှင့်သင်၏မြွေ & tiktok ဗီဒီယိုများနှင့် reels မှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတွေ့ Give - ရွေးချယ်မှုန့်အသတ်ဂီတနှင့်သင့်ရွေးချယ်မှုမှာအသံသီချင်းစာရင်းကိုနှင့်အတူဥစ္စာဖြစ်ပါသည်, ဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြပြီးနောက်ကြယ်ပွင့်စေနိုင်ပါတယ် ယောရှုအပေါ်! အများဆုံးရေပန်းစားဗီဒီယိုများ၏
👯♀️ Duet ဗီဒီယိုများ👯♀️
တစ်ခုမှာ Duet ပါ! ပိုကောင်းနှင့်အဘယ်သို့သောလမ်းဂိမ်းထဲမှာရနေတဲ့ Duet စေ။ Reels သင်၏မိတ်ဆွေများ, ချစ်ရသူနှင့်ပင်နာမည်ကြီးတွေနှင့်အတူ Josh အပေါ်လုပ်! ဒါကြောင့် 20 မီတာ Celebrity သြဇာလွှမ်းမိုးမှု🤩!
အပေါ်တစ်ဦး groove ရယခု Josh Like ဗီဒီယိုအပေါ် Duet အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူသွားရ! 🤩
ထိပ်တန်းအိန္ဒိယမုန့ဗီဒီယိုနှင့် Tiktok ဖန်တီးသူဟာ Josh အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ယခုကြောင့်သင်ကထိပ်ပေါ်မှာသွားနိုင်ပါတယ်
! ကဲ့သို့ပင်အတိုင်းလိုက်နာနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးနာမည်ကြီးတွေနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးဖန်တီးရှင်များ၏ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ Discover ပလက်ဖောင်းအသစ်အခွက်တဆယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနှင့်တစ်ဦးသည်မြွေထဲမှာကြယ်ပွင့်ဖို့အခွင့်အလမ်း Faizu, ဆယ်ကျော်သက် Tigada သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်ဆုံးကြယ်များနှင့်နောက်လိုက်များ၏အကျိုးစီးပွားကိုသာသန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူရယ်စရာအတိုဗီဒီယိုကိုရယူပါ။ အတွက်
📲ပြတိုက်မှူး Feed သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား📲
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေယခုသင်အထူးသင့်အကြိုက်ဆုံးဘာသာစကားမှာသင်တို့အဘို့တာဝန်ယူထားသော feeds တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မသိစေရန်နှစ်သက်သောနေပါသည်! ဟိန္ဒူ, အင်္ဂလိပ်, တမီး, ဂု, ကန်နာဒါ, မလေးရာလ, မာရသီ, ဂူဂြာရ, ဘင်္ဂလာ, အိုရီရာပနျခြာပီနှင့် Bhojpuri အဘိဓါန်: 12 ဘာသာစကားများလောလောဆယ်မရရှိနိုင်ပါ။ ပလက်ဖောင်းတစ်ဝှမ်းလွယ်ကူမျှဝေခြင်း🤝အချို့ရယ်စရာရေစာ reel ဗီဒီယိုကိုရယူပါတွေအများကြီး!
ကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘောင်းဘီတို status ကိုဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်သင်နှစ်သက်သောတစ်ခုခု Be
- အလွယ်တကူသင်၏လူမှုမီဒီယာအဖြစ်, Whatsapp ရေစာကိုဗီဒီယိုပြ status ပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူ Facebook ကို reel သို့မဟုတ် set ကိုဖျော်ဖြေရေးမျှဝေပါ။ အခမဲ့အဘို့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဘောင်းဘီတိုဗီဒီယိုများ။ တစ်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို Create, နောက်ဆက်တွဲပါဝါဖန်တီးသူတူများနှင့်ရှယ်ယာ!
အကြှနျုပျတို့သညျသငျ့ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်။ မကျေလည်မှုများ, တုံ့ပြန်ချက်, ဒါမှမဟုတ်အကြံပြုချက်များအဘို့ -
💖 [email protected] မှာကျွန်တော်တို့ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင် App ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ! 💖
ဘာအသစ်လဲ Josh: Short Videos App - Watch For Free 4.10.23